Imisebenzi kunye neentlobo zokunyusa isigulana | JBH yezoNyango
Umsebenzi wokuphakanyiswa kwabaguli abakhubazekileyo:
Ukuhambisa abantu ngokuhamba okungahambi kakuhle ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye kunokuphakamisa isigulana ukusuka emhlabeni ukuya ebhedini; iinyawo zesisu sinokuvulwa ukuze zisondele kwisigulana; ivili langemva line-brake enokuqhekeza ukunqanda ukuphakamisa isigulana xa isigulana siphakamisiwe Hambisa kwaye ubangele ukonzakala okungachazwanga kubasebenzi bezonyango okanye kwizigulana. Iringi yokuphakamisa inokujikeleza i-360 °, enokuhambisa ngokulula isigulana ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Isilingi ekhethekileyo inokuhlengahlengisa ukuma, kunye nezilayidi zemibala eyahlukeneyo kumanqanaba amaninzi zilungele umsebenzisi ukuba ahlengahlengise ukuma. Umsebenzi wokumisa likaxakeka unokusetyenziselwa ukunqumla umbane ngexesha eliphambili ukukhusela abasebenzisi kunye namalungu osapho. Inokuba lula kwaye idityaniswe ngokukhawuleza kwaye igoqwe ngokulula ukuyihambisa.
Uhlobo lokuhamba ngenqanawa iilifti zihlala zisetyenziswa kumaziko oqeqesho okanye kwizibhedlele. Zisetyenziselwa ukuhambisa izinto ezinje ngezitulo kunye nezitulo apho into ehambayo ihleli khona okanye ilele kwilifti.
Ukuphakanyiswa kwezitepsi ezihambayo kusetyenziswa ukunceda abantu abangahambelaniyo ukunyuka nokuhla kwezitepsi, kodwa into ehambayo iyodwa ayinakwenziwa ngokuzimeleyo. Umntu othile kufuneka ancede ukuqinisekisa ukhuseleko.
Iilifti ezingatshintshiyo zihlala zibekwa emhlabeni ecaleni kwebhedi, kwaye kukho neentsika ezifakwe kwiimbombo zone zegumbi, zixhotyiswe ngezilayingi ukwenza ukuba izinto ezihambayo zihambe ngaphakathi kuluhlu lomkhondo.
Ukuphakanyiswa komgaqo kaloliwe kukuphakamisa into ehambisa into ekujolise kuyo ngesilingi ecaleni komgaqo kaloliwe efakwe eluphahleni. Ukungancedi kukuba ukufakwa kwengoma kufuna ukwakhiwa, kwaye nje ukuba ifakiwe, indawo yomkhondo ayinakuguqulwa, kwaye notyalo-mali lukhulu, ke kufuneka lukhethwe ngononophelo.
Isilingi yeyinxalenye ebalulekileyo yokuphakanyiswa kombane. Inokwahlulwa ibe luhlobo lwesilingi, uhlobo olusongelweyo, uhlobo lomlenze olwahluliweyo (olusongelwe ngokupheleleyo, olusongelweyo), uhlobo lwendlu yangasese, njl.njl.
Abantu abadala abagula kakhulu, abanamalungu omzimba, abakho zingqondweni okanye abangahambi kakuhle kwimisebenzi yabantu abadala, nokuba balele ekhaya, kwikhaya labalupheleyo, okanye esibhedlele, inkathalo yokuhlamba, ukukhathalela abantwana kunye nomgangatho wobomi yingxaki ebalulekileyo. Kwezi zigulana okanye abantu abadala, ulusu lomzimba wonke lunokucocwa kuphela ngokukhuhla. Umongi esibhedlele okanye kwizizalwane ekhaya bangabamba isitya okanye ibhakethi lamanzi ashushu, bawamanzise ngetawuli, emva koko bahlikihle. Kuba kunqabile ukusebenzisa iisepha ezifana nesepha kunye nokuhlamba umzimba ngexesha lokukhuhla, ukukhuhla kude kube kukucoceka nokucoceka. Ngokukodwa kwi-orthral orifice kunye ne-anus, ucoceko lokukhuhla luthintelwe kakhulu. Imvakalelo yokuhlikihla nayo imbi kakhulu kunokuhlamba. Ngethamsanqa, ezi zigulana okanye abantu abadala abasakwazi ukubonisa iimvakalelo zabo. Kwezi zigulana okanye abantu abadala abalala ebhedini ixesha elide kwaye abakwazi ukuzikhathalela, akukubi ukuba nomntu ozokunceda ukukhuhla rhoqo. . Ke ngoko, ezi zigulana okanye abantu abadala bahlala bephethe ivumba elingathandekiyo, izehlo zosulelo lomchamo kunye neebhedi ziphezulu kakhulu, kwaye umgangatho wobomi uphantsi kakhulu.
Olu hlobo lokuphakamisa lunokusetyenziselwa kumakhaya nakumaziko ezonyango. Emva kokuba i-R & D kunye nemveliso isetyenziswe emarikeni, ngokukhawuleza itsala ingqalelo yomntu wonke kunye nokwamkelwa, kuba ilifti isombulula ingxaki enkulu yezigulana ezilele ebhedini, ethandwa zizigulana nabantu abongikazi. Ngoncedo lwalolu hlobo lokuphakamisa, abantu abadala okanye abaguli banako ukuhlamba yonke imihla, ukunciphisa ulusu kunye nosulelo lomchamo kwizigulana ezileleyo kunye nabantu abadala, kususwe ivumba elikhethekileyo emzimbeni. Nokuba uhlala ebhedini ixesha elide, ungaqhubeka nokonwabela ukuhlamba. Gcina umzimba wonke ucocekile kwaye womile, uphucula kakhulu umgangatho wobomi babantu abadala kunye nezigulana ezinemisebenzi engathandekiyo.
ibhedi esibhedlele ngokuzenzekelayo, ibhedi yamandla esibhedlele, ezilahlwayo kwezonyango, imaski yomlomo wobuso, ibhedi yokulala kwizigulana, iibhedi zononophelo,
ezilahlwayo kwezonyango, ibhedi esibhedlele ngokuzenzekelayo, imaski yomlomo wobuso, ibhedi yamandla esibhedlele, iibhedi zononophelo, ibhedi yokulala kwizigulana,